Waaheen Media Group » Guddoomiyaha Maxkamadda sare iyo Xeer ilaaliyaha guud oo Seeftu saaran tahay
Browse:Home Waaheen News Guddoomiyaha Maxkamadda sare iyo Xeer ilaaliyaha guud oo Seeftu saaran tahay
Hargeysa(Waaheen) warar hordhac ah oo ka soo baxaya Isku-shaandhaynta Madaxweyne Siilaanyo bilaabay ayaa la sheegaya in ay sahayan doonto Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil iyo Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Xasan Axmed.
Ilo wareedyo u dhuun daloola Qasriga Madaxtooyadda ayaa sheegaya in Madaxweyne Siilaanyo buuxinayo xubnaha Garsoorayaasha Maxkamadda sare ka kooban tahay oo dhan 11 xubnood oo ay ka shaqaynayeen oo kali ah shan xubnood.
Magacaabista xubnahan ayaa la sheegaya in ay ku jirto xil ka qaadaista Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, kaasoo la hadal hayo in lagu bedelayo Qareenka Guud ee Xukuumadda Qareen Ibraahim Iidle Saleebaan, kaasoo beeshooda Sacad Yoonis loo balan qaaday kursigaasi, iyadoo uu hore u hayan jiray Oomane oo ay isku beel yihiin.
Sababaha Xil ka qaadista Guddoomiyaha Maxakamadda Sare ayaa loo aanaynayaa dibu-habayntii Garsoorka ee Madaxweyne Siilaanyo ku balanqaaday oo socon weyday. Dhinaca kale waxa Beesha uu Guddoomiyaha Maxkamadda sare ka soo jeedo loo magacaabay Wasiir ku-xigeenka Gaashaandhiga oo laga dhigay Cabdi Daahir Camuud.
Magacaabista Cabdi Daahir Camuud ayaa keenaysa in Beesha Ayuub banayso kursiga Maxkamadda sare maadaama marka horeba Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ka qaaday Kurisga Wasiir ku xigeenka gaashaandhiga oo ay lahaan jireen.
Dhinaca kale, Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Xasan Axmed Aadan ayaa lagu wadaa digreetada u horaysa ee la filayo ee xil ka qaadista ah in uu ku jirayo, hase yeeshee ilaa hada si cad looma oga xilkaas qof ka loo magacaabi doono, inkasta oo ay wararku u badinayaan Beesha Saaxil in Garsoore ka soo jeeda loo magacaabi doono, maadaama Beesha Ciise Muuse aanay ku lahayn masuuliyiinta Xukuumadda Halw asiir mooyaane wax kale.
Garsooraha la hadal hayo ayaa ah Cismaan Ibraahin Bullaale (Fanax) oo hada gacanta ku haya Dacwadda Wargeyska Hubaal, horena u riday Dacwadihii Xukuumaddu dhibanaha ka ahayd ee Boqor Buurmadaw iyo Boqor Raabi, kaasoo la filayo in uu xukuumadda u dhuun daloolo. Jagadaasna uu uga faa’iidayn doono.
Si kasta ha ahaatee waxa loo dhegtaagayaa Digreetada danbe ee hawada ku soo jirta oo laga yaabo inay dhakhso u soo baxdo.